एक्सरसाइज कुन बेला गर्दा धेरै बोसो घट्छ? - Mitho Khabar
January 30, 2020 mithokhabarLeaveaComment on एक्सरसाइज कुन बेला गर्दा धेरै बोसो घट्छ?
यसअघि पनि केही अध्ययनले यस्तै नतिजा देखाएका थिए। तर केही अध्ययनमा ब्रेकफास्ट नखाई र खाएर व्यायाम गर्नेहरूबीच खासै भिन्नता नपाएपछि यो अवधारणामा निकै बहस हुँदै आएको छ।अहिलेको यो अध्ययनले पनि यही नै सही भनेर ठोकुवा त गर्दैन। यसमा अझै व्यापक र ठूलो समूहमा अध्ययन-अनुसन्धान आवश्यक छ।